Marka qod6 Galaxy iyo iPhone 6 qalabka ayaa dhawaan la sii daayay, taageerayaasha ayaa la safka ah u yeeshaa, oo taageere kasta u muuqataa ugu faraxsanahay inaan ku leedahay qalabka. Tan iyo markii ay ku jira hindisooyin cusub ka ugu doonteen shirkadaha, taas baahida sare ayaa la filayaa. Si kastaba ha ahaatee, dadka ayaa ka badan oo xiiseynaya in la ogaado, qalab sara kacaba badan oo kale ah; laakiin maxaad ay doonayaan inaan waxyaalahan oo dhan wax u yaqaan? Waxaan qabaa in ay doonayaan in ay ogaadaan oo qalab dheeraad ah oo ka xoogbadan, waa in kale. Haddii ay sidaas tahay ma, markaas waa in dadka waawayn ay noqon waalan iyo qanacsanayn hindiseen.
Apple sameynayo faa'iido dheeraad ah marka la barbar dhigo Samsung, laga yaabee, ma aan ogayn! Waxaan filaynaa tartan adag, kuwaas oo laba kalluun weyn oo u dhexeeya. Aakhirkana, waa mid ka mid ah guusha u leh dadka waawayn badan oo socoto ah ee badeecada - laakiin laabaya karaa in la isticmaalo sida mid ka mid ah siyaabaha ay u tagaan oo ku saabsan? Square Ganacsiga, shirkad ku takhasustay damaanad qalab, sameeyay tijaabo ah oo ku saabsan labo qalabka Galaxy qod6 iyo iPhone 6 by iyaga hoosaysiiyo galay imtixaan jidh dil ah oo la isticmaalayo ay mashiinka ma laab ah in la ogaado marka qalab oo gebi ahaanba ka joojin doonto in ay shaqada cadaadis. Ha noo arkaan imtixaanka qalab kasta;
Galaxy qod6 Jirdilka-Test
Imtixaanku wuxuu ka soo baxay Square Trade loo yaqaan tijaabada gacnta Saddex-Point ah, ku dheehan yahay, qalabka-deedii laba taageero, mid ka mid dhamaadka kasta, iyo xoog, midhona waxaa laga codsadaa ee dhexe. Waxaad la yaabi karaan waxa ka dhacaya la maankiinna weyn ee Square Ganacsiga, laakiin ay si dhab ah la siiyo dadka waawayn ay si maldahan oo ku saabsan sifooyinka qalabka. Ka dib markii ciidamada hoos u ahaa si joogto ah u codsatay, qod6 Galaxy ka sara kacaba ka yar 110 rodol oo ka mid-force cadaadis. Galaas Daboolka sare, screen qalooca, si deg deg ah dillaac at this cadaadis marka qallooca ku yiilleen. Ugu 149 pounds, qod6 Galaxy ahaa gabi ahaanba lumay. Square Ganacsiga kama labalabeyn in ay sii daayaan video ee dadweynaha, kaas oo helay dhowr jawaab ka taageerayaal badan.
Baaritaankaan ka dib, Samsung marnaba tegey aamusan oo ku saabsan arrinta. Waxa xiiso leh, Samsung ma murmi natiijada Square Ganacsiga ee, laakiin waxa ay ku salaysan sheegashooyin ku saabsan xaaladaha ay ku haboon, ku dheehan yahay, cadaadis oo kale ma jiri karaan marka uu qof ku fadhiya qalabka iyadoo uu jeebka ka dib. Samsung ku dooday in cadaadis ka mid ah 110 pounds dhif ku dhici doontaa wixii ay markii sakhiray cadaadiska ka dhanka kursiga keydka, halka in jeebka dib. Xaaladda noocaas ah, Samsung ayaa sheegay in cadaadiska caadiga ah marka uu qof ku fadhiya casriga ah ayaa laga yaabaa in ku dhawaad ​​66 pounds. Si kastaba ha ahaatee, ma uusan cadaadis ku xiran tahay miisaanka qof oo xagal ah ee qalabka uu sakhiray galay cadaadiska u dhexeeya jidhka iyo kursiga keydka? Samsung ayaa sidoo kale sheegtay in qalabka waxaa la hoos mari ilaa 79 pounds cadaadis, taas oo loo baahan yahay in ay jebiyaan xidhmooyin shan qalin.
Samsung waxa kale oo intaa ku daray in hore iyo xagga dambe dhinac Galaxy qod6 leeyihiin cimri dherer kala duwan, oo taas waxaa loo kama muuqato video ah soo saartay. Sidaa darteed, sida ay Samsung, qalabka hubaal jebin doono ciidanka of 110 pounds ku xiran tahay sida uu u sakhiray in cadaadis weyn. Samsung ayaa sheegtay in ay soo saaraan video ah oo muujinaya cimri dherer ay qalab, iyada oo laba videos muujinaya baaritaan oo ka mid ah labada dhinac; hore iyo kooxda dib. Waxaa dhab ahaan u sii daayay ay video muujinaya dalbanayo, oo codsaday Square Ganacsiga in ay soo saaraan video kale oo lagu imtixaami ay imtixaanka.
Gunaanad kiiskan si fudud loo samayn karaa. Haddii Samsung Galaxy qod6 u adkeysan karaan 66 pounds, taas oo ah cadaadiska caadiga ah, ka dibna qalab ay tani tahay oo kaliya lagu kalsoonaan karo xataa haddii ay ku riday jeebka iyo dib u sakhiray in cadaadiska qaar ka dhanka kursiga keydka ah. Si kastaba ha ahaatee, Samsung 'waajib' galin xaqiiqada ah in qalabka sara kacaba at 110 pounds. Dhab ahaantii taasi, wax iibsadaa waa in sidoo kale diiradda saaraan qaar ka mid ah daryeelka yar si looga fogaado laabaya qalabka halka jeebka.
iPhone 6 Cadaadiska-Test
By habka aan u baahan tahay oo dhan, kuwaas oo lala barbardhigo, haa, dabcan waxaan u baahan nahay in la ogaado waxa dhacaya iyo sameyneynaa gunaanad fiican. Marka Square Ganacsiga sakhiray iPhone 6, waxaa sara kacaba at 110 pounds, oo ugu danbeyn ku guuldareystay qiyaastii 179 pounds cadaadis. Dhismaha iPhone 6 waa screen guri-qaabeeya, taas oo ka caawisay in ay iska caabin laabaya iyo dillaacin. Imtixaanka cadaadiska ee Galaxy qod6 iyo iPhone 6 labada fuliyay hab la mid ah, laakiin dabcan, qalabka yihiin cimri dherer kala duwan.
Xaaladdan oo kale, waxaannu ku tirinnaa karaa in aysan jirin baahi loo qabo in saaray qalab aad ee jeebka ka dib. Dhaf ayaa gadaal deform kartaa qalab aad, oo eegi doonaa mid laga cabsado. Sidoo kale, waxaan u baahan nahay si loo helo hab wanaagsan oo loo waday qalabka our. Xusuusnow, halka socodka aad casriga ah ee jeebka ka dib, waxa ay taasi adiga hoose muuqan yar jiidasho leh hal dhinac. Waxaa jira habowga muuqaal in yaabiso laga yaabaa kuwa doonaya in ay eegaan aad ee ka soo laabtay. Sidaa darteed, bal aynu eegno meelaha kale in uu kaydiyo qalabka our halkii ay ku sugan goobo ka dib.
Marka laga imtixaanada kor ku xusan, Galaxy qod6 iyo iPhone 6 yihiin doorasho wanaagsan aad qabto ee suuqa hadda, oo weliba waxay hantiyi qaababka ugu fiican ee aad dooni laga yaabaa in casriga ah. Haddii aad leedahay model ah oo ka weyn, waa markii si ay kor ka mid ah, kuwaas oo qalab cusub - oo amaantaba aad style iyo fashion! The Wondershare MobileTrans kaa caawinaysaa in aad waxyaabaha ku jira mid ka mid ah qalab lagu wareejiyo si kale ah, iyada oo la hubinayo isaga mid qumman iyo asalnimada.
Waxaad ogayn laga yaabaa in inta aad u baahan tahay Wondershare MobileTrans ilaa aad isticmaasho. Marka lagu casriyeeyo telefoonada, wareegaya qalab cusub, ama beddelidda sidayaal, shirkadaha yar oo keliya telefoonka gacanta ayaa kaa caawin kara in wareejinta xiriirada; Si kastaba ha ahaatee, la MobileTrans, kuu soo gudbin karaa wax kasta, oo ay ku jiraan sawirrada, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, music, videos, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, iyo Guda call - kaliya la click ah. Waa halis xor ah oo nabad ah.
Inta badan la weydiiyay Dhibaatada ugu yeeray iPhone, iyo sida loo xaliyo?
Common iPhone dhibaato iyo xalal ku amraya
30 Talooyinka Bettery iPhone Battery Life
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Xiriirada in vCard
Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone
> Resource > iPhone > Galaxy qod6 Edge qallooca vs iPhone 6 qallooca